सस्तो र गुणस्तरीय भनिएको सिजीको नेट कहिले आइपुग्छ तपाईंको टोलमा ? « Clickmandu
प्रकाशित मिति : 22 September, 2021 9:58 am
काठमाडौं । झण्डै चार महिनाअघि चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सिजी नेटको घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवाका लागि सबैभन्दा सस्तो शुल्कमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा लिएर आएका छौं, जसको शुरुवात आजबाट भएको छ, डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’
चौधरीले सिजीको इन्टरनेट सस्तो नभएको बरु अहिले ग्राहकहरुले कम गुणस्तरको इन्टरनेटका लागि महंगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको समेत तर्क गरेका थिए ।
यही प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि कम्पनीले हाल काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट बिस्तारको कामलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएको छ । यसबीच कम्पनीले तार तान्ने काममा अपेक्षाकृत गति नबढ्दा पहिलेको कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर अर्को कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले धमाधम काम समेत भइरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा शुरुमा काठमाडौं उपत्यका र त्यसपछि बाहिरी जिल्लासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई महंगो शुल्क तिरेर मध्यम गतिको इन्टरनेट उपभोग गरिरहेकाहरुका लागि यो खुसीको खबर थियो ।
कम्पनीले ग्राहकलाई सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार हाल मासिक जम्मा ९९९ रुपैयाँमा तिरेर १२० एमबीपीएस गति भएको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
कम्पनीलले क्षेत्रगतरुपमा नेटवर्कको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उसैगरी ग्राहकको संख्या पनि थपिरहेको छ । कम्पनीले हालसम्म जति उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् उनीहरुबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जनाएको छ ।
‘सिजीमा जोडिने ग्राहकहरु गुणस्तरीय सेवाका लागि आउने हो, अहिले अन्य कम्पनीका ग्राहकहरुले गुणस्तरीय सेवा नपाइरहेको अवस्थामा सिजीको इन्टरनेट विकल्प बन्ने पक्का छ, अहिलेसम्म पाएको प्रतिक्रियाबाट हामी निकै आशावादी छौं,’ चौधरी ग्रुपका जनसम्पर्क विभागका महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलले क्लिकमाण्डुसँग भने ।
उनले सिजीले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताए ।
‘सिजीले जहिले पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ, लामो इतिहास बोकेको ग्रुप अन्तर्गतका सबै सेवाहरु गुणस्तरमा प्रतिबद्ध छन्, सिजी इन्टरनेट पछिल्लो उदाहरण हो,’ उनले थपे ।
सिजीले इन्टरनेट सस्तो मात्रै बनाएको छैन, नेपालमा इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउने योजना नै बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । सिजी ग्रुपका अध्यक्ष तथा अर्बपति विनोद चौधरीलले आफूले टेलिकम कम्पनी शुरु गर्दा भ्वाइस कल निःशुल्क हुने र डाटा पनि सस्तो हुने बताइसकेका छन् ।
‘अहिले इन्टरनेट सबैका लागि अत्यावश्यक भइसकेको समयमा नेपालीहरुले महंगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्, जब सिजी आउँछ तब भ्वाइस कल निःशुल्क र डाटाको शुल्क पनि कम हुनेछ,’ चौधरीले सार्वजनिकरुपमा भन्दै आएका छन् ।
चौधरी ग्रुपको यही योजना अन्तर्गतको सिजी इन्टरनेट पछिल्लो प्रडक्ट हो ।
हाल नेपालमा करिब ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । तर, हाल सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा उपभोक्ताले मूल्यअनुसारको इन्टरनेट सेवा नपाएको कम्पनीको दावी छ ।
कम्पनीले उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा पाउने हकका लागि सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेको दाबीसमेत गरेको छ ।
कहाँ भयो बिस्तार, कहाँ बाँकी छ ?
चौधरी ग्रुपका जनसम्पर्क महाप्रवन्धक पौडेलका अनुसार हालसम्म सिजी इन्टरनेट सेवा ललितपुरको जावलाखेल र पाटन क्षेत्रमा बिस्तार भइसकेको छ । त्यसबाहेक उपत्यकामा कुलेश्वर, कुपण्डोल, बालाजु, सतुंगल, छाउनी, कलंकी, कालिमाटी, शान्तिनगर, धापासी, महाराजगञ्ज, शंखमूल, गोंगबु र कोटेश्वरमा नेटवर्क बिस्तार गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले हाल टोखा, चावहिल, स्यूचाटार, कपन र सातदोबाटोमा तार तान्ने काम गरिरहेको छ । साथै, नोभेम्बरसम्ममा सूर्यबिनायन, कौशलटार, गौशाला, मूललपानी, जोरपाटी, लाजिम्टाप, ठमेल, भैसेपाटी, सितापाइला, सानोठिमी, बुढानिलकण्ठ÷नारायणनाथ, इमाडोल, राधेराधे क्षेत्रमा बिस्तार गर्नेछ । त्यसैगरी बल्खु, बालकोट, धर्मस्थली, हात्तिवन, न्यूरोड, पुतलिसडक, रानीबारी, पेप्सीकोला र बिशालनगरमा पनि सोही समयभित्र इन्टरनेट सेवा बिस्तार भइसक्नेछ ।
कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा सेवा बिस्तार गरिसकेपछि बाहिरी जिल्लालमा सेवा बिस्तारको काम शुरु गर्नेछ । कम्पनीले अर्को वर्ष शुरु नहुँदै बाहिरी जिल्लामा नेटवर्क बिस्तारको काम शुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।